calankiisii baa dhacay maraykanee!
Calankiisiibaa dhacay Maraykanee!
Calankiisiibaa dhacay Maraykanoo waataa ciida lagu daray cirhirdiyayaashiisiiye
Ciidankiisii cudada lahaayee badaa carbeed fadhiyay waa caymadee
Bushbaa cawiyo dharaarba calaacalayoo caawimo waydiisanaya beesha caalamkee
Cibraqaad bay u noqotay cadawgii islaamkoo cabaadkii maraykankaa dhagahooda ka sii ciyayee
Cuqubaduu geystay baa gantaalo cirka kasoo dhacay noqotee cusaama yeysan waxba eersan
Cadaadiskuu saaray islaamkiyo, cunaqabatayntii Ciraaq baa ku qarxoo waakan cawaaqibkeediyee.
Carafaat bay cabashadiisii cayaar ka dhigteen iyaga iyo yuhuudiyo saw caawa ciil lama gamila?
Cabsibay qaaday caruurtiisiyo maalin cadbaa hilbihiina haadu cuni bay isleeyihiine
Cidii maraykankan u caraysaneey calfo halkaad joogto cawadii baa dilaacdoo wuu ciirciirayaaye
Cuqdad buu qaaday Ingiriisoo ceeb buu ka baqanayaaye naatoo dhami haday isu tagto may caawin maraykan?
Tanbuu ka cabanayaaye, mataasay cadaabiyo ciqaabtii alle u danbay saa?